बिग मर्जरको सकस, बनाउन खोजेको हलो बन्दैछ मुंग्रो - Aarthiknews
मंगलबार, २६ कार्तिक २०७६ Tuesday, 12 November, 2019
बिग मर्जरको सकस, बनाउन खोजेको हलो बन्दैछ मुंग्रो
मौद्रिक नीतिको चटारोमा राष्ट्र बैंक
काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति बनाउने चटारोमा नेपाल राष्ट्र बैंक छ । चालू आर्थिक वर्ष सकिन पाँच दिन मात्रै बाँकी छ । यो अवधिभित्र मौद्रिक नीति ल्याउनुपर्ने बाध्यता राष्ट्र बैंकलाई छ ।
राष्ट्र बैंक अनुसन्धान विभागका कर्मचारी भने जेठ महिनाको मुलुकको आर्थिक अवस्थाको तथ्यांक जोड घटाउमा नै व्यस्त छन् । त्यो विवरण सार्वजनिक गरेलगत्तै मौद्रिक नीति ल्याउने तयारी राष्ट्र बैंकले गरिरहेको छ ।मुलुक यतिबेला मौद्रिक नीतिको बहसमा छ । अर्को वर्षका लागि केन्द्रीय बैंकले कस्तो मौद्रिक नीति ल्याउला भन्नेमा सर्वसाधारणको पनि चासो उत्तिकै छ ।
खासगरी, राष्ट्र बैंक अनुसन्धान विभागका कर्मचारी मौद्रिक नीतिमा समावेश गर्नुपर्ने बिषय नछुटुन् र नदोहोरिउन भन्ने उद्देश्यले अहोरात्र खटिएका छन् । विगतका वर्षमा मौद्रिक नीति असारभित्रै सार्वजनिक गरिएको थियो । यस वर्षको मौद्रिक नीति पनि यही महिनाभित्र ल्याउन अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले निर्देशन दिएसँगै राष्ट बैंकका गभर्नर डा. चिरन्जीवी नेपाल, डेपुटी गभर्नरद्वय चिन्तामणि शिवाकोटी, शिवराज श्रेष्ठ र राष्ट्र बैंक अनुसन्धान विभागका प्रमुख गुणाकर भट्टलगायतका कर्मचारी खटिन पुगेका हुन् ।
अर्थमन्त्री खतिवडाले चालू आवमा ८.५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि र ६ प्रतिशत मूल्यवृद्धिको सिमाभित्र रहेर मौद्रिक नीति ल्याउन निर्देशन दिएका छन् । राष्ट्र बैंक बिग मर्जरको नीति ल्याउने कि नल्याउने भन्ने बारेमा अन्योलमा छ । गभर्नर नेपालले बिग मर्जलाई आफ्नो प्रतिष्टासँग गासेका छन् । तर, डेपुटी गभर्नर शिवाकोटी बिग मर्जर ल्याउन नहुने पक्षमा उभिएका छन् । उनले बिग मर्जर बाध्यकारी बनाउन नहुने र स्वच्छिक रुपमा छाडिदिनुपर्ने पक्षमा उभिएका छन् ।
बिग मर्जरमा जानका लागि प्रोत्साहन स्वरुप कर छुट लगायतको व्यवस्था गरेर जानुपर्ने पक्षमा छन् । तर, गभर्नर भने बिग मर्जरलाई बाध्यकारी बनाउने पक्षमा छन् । पछिल्लो समय गभर्नर मात्र बिग मर्जको पक्षमा छन् । उनी राष्ट्र बैंक सञ्चालक समितिमा एक्ला बृहस्पती बन्न पुगेका छन् ।
अरु सबै बिग मर्ज स्वच्छिक बनाउनुपर्नेमा उभिएका छन् । गभर्नर बिग मर्जरको पक्षमा एक्लै उभिएकाले उनले सोचेजस्तो बिग मर्जरको नआउने भएको छ । कर छुटको व्यवस्था सहितको स्वच्छिक मर्जर ल्याउने तयारी भएको छ । २८ वाणिज्य बैंकलाई बिग मर्जर गराएर १०–१२ मा झार्ने बाध्यकारी व्यवस्था नल्याइने भएको छ । राष्ट्र बैंकका एक उच्च कर्मचारीले हलो बनाउन खोजिएको बिग मर्जर मुंग्रो बन्न पुगेको संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिए ।
यतिबेला बिग मर्जरका कारण बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा मौद्रिक नीतिको व्यापक चासो छ । शेयर लगानीकर्ता पनि पर्ख र हेरको अवस्थामा छन् । उनीहरुको आकांक्षा पनि मौद्रिक नीति कस्तो आउला भन्ने छ । बिग मर्जर ल्याउने भनिएकाले आगामी मौद्रिक नीतिलाई सबै तहका नागरिकले उत्सुकतापूर्वक हेरेका छन् । बिग मर्जर ल्याउने हो कि होइन । ल्यायो भने कस्तो ल्याउने हो भन्ने कौतुहलता छ ।
बैंकका एक कर्मचारीले अर्को कर्मचारलाई भेट्दा पनि बिग मर्जरका बारेमा कुरा गर्ने गर्छन्, राष्ट्र बैंकले बिग मर्जर ल्याउन लागेको हो कि होइन थाहा पाउनु भएको छ भन्ने गर्छन् । अझ राष्ट्र बैंकका उच्च तहका कर्मचारीसँग घुलमिल हुने कर्मचारी रहेछ भने त तपाईंको त राष्ट्र बैंकका फलानो (उच्च तहका) कर्मचारीसँग सम्पर्क हुन्छ, बिग मर्जरका बारेमा तपाईंलाई थाहा नभए अरु कसलाई थाहा हुन्छ र ? भन्ने जस्ता प्रश्न तेर्साउने गर्छन् । बिग मर्जर हुने हो कि होइन भन्ने चिन्तामा छन् । बिग मर्जरको बिषय थप बहसको बिषय बन्दै गए पनि बिग मर्जर ‘हात्ती आयो हात्ती आयो फुस्स’ भने जस्तै हुने भएको छ ।
ग्लोबल आइएमई बैंकको १५०औं शाखा बन्दीपुरमा
गुराँस लघुवित्तको बुधबार बुक क्लोज हुँदै
गुहेश्वरी मर्चेन्टद्वारा नगद लाभांश प्रस्ताव
नागवेली लघुवित्तको नाफा १४२ प्रतिशतले बढ्यो
गणपति माइक्रोफाइनान्सले ७ प्रतिशत बोनस वितरण गर्ने
फेरि अर्का व्यवसायीलाई पक्राउ गर्न आदेश
वाणिज्यदूतहरुको विश्व महासंघको क्षेत्रीय सम्मेलन नेपालमा हुने
एनसेलका सुपर सेलरले सुनदेखि माउन्टेन बाइकसम्म पुरस्कार पाए
परिसंघले सामाजिक कोषका विषयमा प्रतिबद्धता जनायो
५ बर्षमा १० हजार भन्दा बढी ट्रेडमार्क दर्ता
चिलिमेको लाभांश सुरक्षित गर्ने भोलि अन्तिम दिन
शंखधर पार्कको शौचालयबाट मासिक २ सिलिण्डर एलपिजि ग्याँस
३ हजारसम्म ज्याला दिँदा प्यान नचाहिने
उच्च नाफा गरेका तर लाभांश घोषणा नगरेका वाणिज्य बैंकप्रति लगानीकर्ताको आशा
लगानीकर्ता खोज्दै जनता बैंकका कर्मचारी ब्रोकरको शरणमा
प्रम ओलीलाई दिल्लीमा उपचार गराउन मोदीको प्रस्ताव
श्रीमतीसहित ‘भाइरल अघोरी बाबा’ प्रहरीको फन्दामा
एनएमबि बैंकको लाभांशमा छलाङ
नेपाललाई चासो छैन, विदेशीलाई चिन्ता !
विश्वको आर्थिक वृद्धिदरमा अनपेक्षित गिरावट
महरालाई अझै तीन दिन थुनामै राख्न अदालतको अनुमति